Ayikho imali esayithola kwiVBS: EFF | Isolezwe
Ayikho imali esayithola kwiVBS: EFF
Izindaba / 11 October 2018, 1:50pm / INTATHELI YESOLEZWE
UMNUZ Floyd Shivambu okuvele igama lesihlobo okuthiwa siwumfowabo embikweni weBhange loMbuso. Isithombe: Ayanda Ndamane African News Agency ANA
USIHLALO kazwelonke we-Economic Freedom Fighters, u-adv Dali Mpofu uthi ayikho imali eyatholwa yileli qembu kwiVBS Mutual Bank futhi bonke abahlomula ngokungemthetho ngemali kuleli bhange kufanele babhekane nezinyathelo zomthetho.
UMpofu ubekhuluma nentatheli ye-eNCA uthe yize kuthiwa umfowabo wePhini lomholi we-EFF uMnuz Floyd Shivambu, uBrian Shivambu, wathola uR16 million wase efaka uR1 million kwi-akhawunti ye-EFF bona abakwazi lokhu.
Uvumile ukuthi umfowabo kaShivambu uyilungu le-EFF wathi kodwa lokhu akusho ukuthi kufanele baphawule ngokuthi iPhini lomholi wabo lathola uR10 million kuBrian.
“Asiwona umasingcwabisane asikwazi ukukhuluma ngezinto ezenzeke phakathi kwamalungu omndeni. Uma kukhona onobufakazi bokuthi i-EFF yahlomula ngemali yaseVBS kufanele abulethe emahhovisi ethu aseBraamfontein. Asikwazi ukuphawula ngenzwabethi sifuna ubufakazi,” kusho uMpofu.
Izolo umkhulumeli we-EFF uDkt Mbuyiseni Ndlozi uthe bawuqaphile umbiko ngokudliwa kwezimali zeVBS Bank.
“I-EFF isamile ekutheni bonke abathintekayo nalabo abahlomula ngokungemthetho kukhwabaniswa imali yebhange kumele babhekane nengalo yomthetho. Njengoba sesike sasho ngaphambilini ukuthi kumele banswinywe (blacklisted). Ngaphezu kwalokho abomthetho kufanele baqinisekise ukuthi iyakhokhwa yonke le mali, kudliwe nezindlu zalabo abathintekayo,” kusho uNdlozi.
NgoMashi i-EFF yagxeka uMnyango kaMgcinimafa (Treasury) ngokufaka leli bhange ngaphansi kobuholi besikhashana (curatorship). Yathi leli bhange liyasukelwa ngoba nakhu laboleka imali owayengumengameli wakuleli uMnuz Jacob Zuma ukuze akhokhe imali eyachithwa kulungiswa umuzi wakhe eNkandla.
Kuleli sonto i-EFF ithe ikhathazekile ngokuthi leli bhange ngeke lisakwazi ukubuyela esimeni.
“Ukuvala leli bhange ngeke kusize emizamweni yethu yokwandisa abohlanga endimeni yezezimali. Kumele kusungulwe isu lokuhlenga leli bhange noma kwesekwe elinye elifuna ukusebenzela abantu basemakhaya.
UNdlozi uphinde wabuza ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi kuthuleke ekubeni imali yaqala ukutamuzwa ngo-2015 kuleli bhange.
“Liqalwe ukunakwa ngoba nakhu seliboleke uZuma imali. Sicela iBhange loMbuso libuyekeze indlela eliqapha ngayo ukusebenza kwamabhange ngoba ukuhluleka kweVBS kuwukuhluleka kweBhange loMbuso ukuvikela abantu bakuleli ukuthi izimali zabo zingadliwa ibhekile,” usho kanje.